Ogaden News Agency (ONA) – Shacab Lagu Xidh Xidhay Degmada Yucub Ee Gobolka Doollo.
Shacab Lagu Xidh Xidhay Degmada Yucub Ee Gobolka Doollo.
Posted by Wariye Qaran	/ July 2, 2018
Wararka naga soo gaadhaya gudaha Ogaadeniya gaar ahaana xarunta dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Gumaysiga Itoobiya iyo maleeshiyaadka dhaaraanka u ah Gumaysiga Itoobiya ee hawaarinta ay dad shacab ah ku xidh xidheen dagmada Yucub ee gobolka Doollo.
Dadkan shacabka ah ayaa sida naloo sheegay waxa laga la baxay guryahooda waxaana la geeyay xero ciidan oo ku taala dagmada yucub hadaba waxaan helay qaar kamida magac yada dadkan la xidh xidhay waxaana kamid ah Sheekh Cabdulaahi Aw Cumar iyo Maryama oo aanaan helin magaceeda oo sadexan waxaa kale oo naloo sheegay in tirada dadka la xidh xidhay ay intaas ka badan yihiin.
Ciidamada hawaarinta iyo kuwa Gumaysiga Itoobiya ayaa waxay wadaan dil dhac iyo xidhay ay ku hayaan dadka shacabka ah waxaana isla todobaadkan gudihiisa sida aan wararkaa nagii hore idiin kusoo gudbinay duleedka degmada hawaarintu ku dileen wiil shacab ah.
Shacabka Soomaalida Ogaadeniya ayaa wuxuu la kulmaa tacadiyo isugi jira dil xadhig kufsi iyo boob kaga yimaada ciidamada Itoobiya.